နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်ငါး – Bryan Adams (Everything I Do) I Do It For You | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်ငါး – Bryan Adams (Everything I Do) I Do It For You	20
နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်ငါး – Bryan Adams (Everything I Do) I Do It For You
Posted by မြစပဲရိုး on Apr 13, 2015 in Music | 20 comments
အင်တာနက် တန်ခိုး ကြောင့် ဒီတစ်ခေါက် မှာ အရင်အခေါက် တွေလို ဝှက်ပြီး နေလို့ မရခဲ့။
အမေ အဖေ တွေ နဲ့ ညပိုင်းဘဲ တွေ့နိုင်ပြီး ကျန်အချိန် တွေ က အပြင်မှာ။
အပြင် ရောက်တော့ တစ်အား ပူ အခန်း တွေထဲ ကျ အဲကွန်း တွေ နဲ့ အေး၊ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ စကားတွေ လု ပြောရင်း အသံ ပါ ပျောက်လုလု ဖြစ်ရော။
အတော်လေး ပျော်ဖို့ ကောင်းခဲ့တဲ့ ခရီးလေးလို့ ပြောလို့ ရခဲ့တယ်။
. မြင်တာ ကြားတာ တွေ ကို ပြောစရာ တွေလဲ အပြည့်။
ဟိုး အရင်က မြန်မာပြည်မှာ ဘွဲ့ရ မပြောနဲ့ ၁၀တန်းအောင်ဖို့ တောင် ခက်တာ။
. နောက်တော့ ဘွဲ့ရ တွေ များလာတယ်။ ဘွဲ့လွန်တော့ သိပ်မရှိသေး။
တဖြေးဖြေး နှစ်ဘွဲ့ ရ သုံးဘွဲ့ ရ တွေ ပေါလာရော။
အခုတော့ ဒေါက်တာ ဘွဲ့ အတွက် တောင် အလွယ် ယူလို့ ရ နေပြီ။
ဒါပေမဲ့ ကန့်လန့်ကာ နောက်မှာ စာမသင်နိုင်ဘဲ ကျောင်းထွက် နေကြရတဲ့ ကလေး တွေ ကလဲ နိုင်ငံ အနှံ့ ရေတွက်လို့ မကုန် ဘဲ ပိုပိုပြီး များလာနေတာ ကို မေ့နေကြလေ ရဲ့။
. နောက်ပြီး အလွန်တရာ မှ များပြား လာ တဲ့ ကားများ ထဲ အငှားယာဉ် များ ကလဲ ပေါမှပေါ။
တစ်ချို့ ကား ရှိရင်တောင်မှ မြို့ထဲ ကား ရပ်စရာ ရှားလို့ အငှားယာဉ် တွေ ဘဲ အားကိုး ရတာမို့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခု လို့ တောင် သတ်မှတ် နိုင်တယ်။
အသစ်သွင်းလာတဲ့ ကား တွေ ကလဲ အားလုံးနီးပါး အော်တိုဂီယာ တွေ ဖြစ်ကုန် တော့ နဲနဲ စမ်းလိုက်ရုံ နဲ့ မောင်းတတ် တာ မို့ ဆိုက်ကားဆရာတောင် ကားမောင်းသမား လုပ်နိုင်တော့ တာ။
ဒီနေ့ မြန်မာပြည်ထဲ ကားမောင်း လိုင်စင် ရဖို့ ကို အရင် လို စာတွေ့၊ လက်တွေ့ စာမေးပွဲ တွေ ဖြေဖို့ တောင် မလိုတော့ဘဲ ငွေစလေး ကြဲ နိုင်ရင် အလွယ် ရတဲ့ ခေတ်။
ဒီမှာတင် ကားမောင်းသူတစ်ယောက် လိုက်နာ ရမဲ့ လမ်းစည်းကမ်း တွေ ဟာ ကန့်လန့်ကာ ရဲ့ နောက်မှာ ရောက်သွားတော့ တာ ဆန်းသလား။ နောက်ပြီး ကားများ တဲ့ လမ်းဆုံ လမ်းဂွ တွေမှာ ဘာမှ အထိန်းမရှိ။ ဦးရာ လူ ခေါင်းထိုး ဝင်ပြီး ဗရမ်းဗတာပါဘဲ။ ဒီလို စည်းကမ်းမဲ့ခြင်း တွေ ကဘဲ ကားကြပ်၊ ကားပိတ်ခြင်း ရဲ့ တရားခံ ပါ။ လူများရင် ကားများခြင်း က တော့ ရှောင်လွဲလို့ မရပါ။
ကုမ္ပဏီ ရီဂျစ်စတာ လုပ်ထား သူ တွေ ဟာလဲ မနည်း။
အသိ ထဲ မှာ ကုမ္ပဏီ ပိုင် မရှိသူ များ ခပ်ရှားရှား။
. နိုင်ငံခြား မှာ အလုပ်လုပ် နေသူ တွေထဲမှာလဲ ရန်ကုန် မှာ လာပြီး ဟန်ပြ ကုမ္ပဏီ ဖွင့်ထား သူ တွေ မနည်း။
စီးပွါးရေးစကား မပြောဘဲ နိုင်ငံရေးစကား ပြောနေတဲ့ ကိုယ့် ကို ဂြိုလ်သား တစ်ယောက် လို ကြည့်ကြသေး။
. တော်သေးတယ်။ ကိုယ့် မွေးစား အဖေ က အဲဒီ အကြောင်း ကို စိတ်ဝင်စား ပေလို့။
. ကြည့်ရတာ။ သူ့ မှာလဲ သူ့လူတွေထဲ ဒီလို စုန်းပြူး ရှား နေတော့ ဒီ အကြောင်း တော့ပစ် တွေကို အခုမှ အားပါးတရ ပြောရ သလားဘဲ။
တကယ်တော့ အားလုံး က ၂၀၁၅ အလွန်ကို အတော်လေး စိတ်ပါလက်ပါ စောင့်ကြည့် နေကြတာ။
သူတို့ ကတော့ သူတို့ အကျိုးစီးပွါး အတွက် ပေါ့။
ဝမ်းနည်းစရာ က အောက်ခြေနင်းပြား လူထုကြီး ကိုပါ သူတို့ နဲ့ အတူ ရောပါ တိုးတက် စေဖို့ အတွက် ခေါင်းထဲ မရှိကြတာဘဲ။
. မြန်မာပြည်ထဲ က လူ အများစု မှာ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်ရင်ပြီး ရော ဆိုတဲ့ စိတ် ရှိနေ တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကန့်လန့်ကာ ရဲ့ နောက် က ဇာတ်ဆရာများ ကို ပြည်သူတွေရဲ့ အား ယူပြီး စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ့ မဖယ်ရင် ဘယ်အစိုးရ တက်တက် ဟန်ပြအဖြစ်ဘဲရှိပြီး လူထုကတော့ မွဲမြဲမွဲ နေမှာဘဲ ဆိုတာကို ဂရုမပြု ကြဘူး။
ဟိုး အရင် မပြောနဲ့။ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည် နဲ့ ၂၀၁၅ မြန်မာပြည် ဟာ အတော်လေး ခြားနား နေတော့တာ။
. ကောင်းတဲ့ ခြားနားခြင်း တွေ ရှိသလို မကောင်းတာ တွေလဲ တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။
အဓိက ကတော့ ကျွန်မ အမြဲ ပြောနေ တဲ့ လူတန်းစားကွာဟမှု ပါဘဲ။
. ဒေါ်လာ ရာတန် တွေ ကို အုပ်လိုက် ကိုင်ပြီး သုံးနေတဲ့ လူတန်းစား နဲ့ တစ်နေ့ စာစားဖို့ ကို မနည်း ရှာနေကြ တဲ့ အောက်ခြေ နွမ်းနွမ်းပါးပါး လူတန်းစား ကို ကျွန်မ အချိုး ချ မပြရဲပါ။
. တောက်ပနေတဲ့ ကြမ်းခင်း ကို ပိုပြီး တောက်ပ စေတဲ့ မီးဆိုင်းကြီး တွေ နဲ့ ဟော်တယ်ကြီး ရဲ့ အေးစိမ့် နေတဲ့ စားသောက်ခန်းထဲ မှာ စားနေ တဲ့ လူတန်းစား က အင်မတန် နဲ ပါတယ်။
ဖုန်ထ နေတဲ့ လမ်းဘေး က ဆိုင်တွေ မှာ စားနေတဲ့ လူတန်းစား က အင်မတန် များ ပါတယ်။
အမှန်တရား ကို မြင်တတ် ရင် ဒီ ဆင်းရဲသား လူတန်းစား တွေ အတွက် မစဉ်းစားတတ် မငဲ့ညှာတတ် မပံ့ပိုးတတ် တဲ့ အစိုးရ ကြောင့် ပိုက်ဆံ ကို ပိုက်ဆံလို့ မထင်ဘဲ သုံးဖြုန်း နေနိုင်တဲ့ အင်မတန် ချမ်းသာနေတဲ့ လူတန်းစား ပေါ်လာတာပါ။
ချမ်းသာတဲ့ လူတန်းစား ကို ကျွန်မ မကြိုက် မရှိ ပါဘူး။
ချမ်းသာတဲ့ လူတန်းစား ကို နိုင်ငံ တိုးတက်မှု အတွက် အားကိုး ပါတယ်။
. နိုင်ငံ တိုင်းမှာ လုပ်တတ် ကိုင်တတ် တဲ့ အရင်းရှင်လူတန်းစား တစ်ရပ် လို ကို လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ ကွန်ဆားဗေးတစ် စစ်စစ် အဖြစ် ရပ်တည် ရဲ ပါတယ်။
. နေရာတိုင်း မှာ ကြိုးစားသူ ဟာ မကြိုးစားသူ မလုပ်တတ် သူထက် အခွင့်ထူး ပို ရသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားခြင်း သာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အာဏာ ပါဝါ ကို သုံးပြီး ကြီးပွါးချမ်းသာခြင်း ကို လုံးဝ မထောက်ခံ ပါဘူး။
. မြန်မာပြည် ထဲ မှာတော့ အများစု က အာဏာ ပါဝါ နဲ့ ပင်းပြီး ချမ်းသာ ပြီး ရင်း ချမ်းသာ လာ ကြတယ်။
ဆက်ပြီး ပိုပို ချမ်းသာ လာ ဦး မှာပါဘဲ။
ဒီတော့ ဆင်းရဲ သားများ အတွက် ပိုပြီး ဆင်းရဲ တွင်း နက် ပါ ဦးမယ်။
ကိုယ်တစ်ကိုယ်စာ ပိုပို ပြီး ချမ်းသာရေး အတွက်ဘဲ အားထုတ်သူ တွေ ကြား မှာ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစု လေး တွေ ပိုပိုပြီး များလာ မှာ မဆန်းပါ မဟုတ်လား။ တကယ်တန်း တိုင်းပြည်ကို တိုးတက် စေချိန်တဲ့ စေတနာ ရှိရင် ကိုယ်ချမ်းသာ ရုံ တင်မက ဘဲ ဒီလိုဆင်းရဲ တဲ့ မိသားစု တွေ အားလုံး လဲ လူတန်းစေ့ နေနိုင် စားနိုင် ပညာသင်နိုင် အောင် ဝိုင်းပြီး ပံ့ပိုး ပေးဖို့ လိုတာ။ အခုမှာတော့ တစ်ဘို့ထဲ သမား တွေကြား တိုင်းပြည် ဆုတ်ယုတ်ဖို့ဘဲ ရှိတယ်။ ချမ်းသာ လဲ ဒီ ဆင်းရဲ သူ တွေ နဲ့ တွဲနေ နေ ရတာဘဲ မဟုတ်လား။ ရှောင် လို့ မရဘူးလေ။ ဒီတော့ သူတို့ ကိုလဲ တွဲ ခေါ် မှ ကိုယ်လဲ ကောင်း မယ် လို့ မြင်သင့်တယ်။
ဒီ တစ်ခေါက် ကျွန်မ စားစရာ တွေ ထက် စိတ်ကြိုက် စာအုပ် တွေ သယ် ခဲ့ တယ်။
အဲဒီ အထဲ မှာ ကျွန်မ ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဒီစကား – ၁၀၀ ပါတယ်။
အဲဒါ ကို လေယာဉ် ပေါ်မှာ ဖတ်လာခဲ့တယ်။
သူ့ ရဲ့ စကားလုံးတိုင်း မှာ ပြည်သူ တွေ အတွက် စေတနာ မေတ္တာ နဲ့ တိုင်းပြည် ကို တိုးတက် စေချိန်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ကို တွေ့ရတယ်။
ဒီစကား – ၉ ထဲ မှာ ရေးထား တဲ့ သူ့စကား ကို ဖတ်ရင်း အင်မတန် စိတ်မာ တဲ့ မျက်ရည်မလွယ် တဲ့ ကျွန်မ မျက်ရည်ကျ မတတ် ဖြစ်ခဲ့ တယ်။
အဲဒီ အပိုဒ် လေး ကို မျှ ချင်ပါတယ်။
. စာမျက်နှာ ၃၁
. ဒီစကား- ၁၀၀
ခရီးစဉ် တစ်ခု မှာတော့ ချိုင်းထောက် ကို လက်တစ်ဖက် နဲ့ မြှောက်ပြီး ခြေတစ်ဖက် နဲ့ ခုန် လို့ တက်တက်ကြွကြွ နှုတ်ဆက် ကြိုဆို တဲ့ အမျိုးသားကြောင့် အားတွေ ပြည့်ခဲ့ ရပါတယ်။
မန္တလေး စစ်ကိုင်း သွားလမ်းမှာ လျတစ်ရပ်တောင် မရှိတဲ့ လူသား နေအိမ်လို့ တောင် ခေါ်ဖို့ရာ ခက် တဲ့ အင်မတန် စုတ်ပြတ်နေတဲ့ တဲ ယဲ့ယဲ့ လေး တစ်ခု မှာ တန်းစီပြီး လက်ဝှေ့ယမ်း စောင့်နှုတ်ဆက် နေတဲ့ မိသားစုလေး။
ကျွန်မ က အသားကုန်လက်ပြပေမဲ့ မမြင်လိုက်ကြ၊ မျက်နှာပေါ်မှာ က မျှော်လင့်ချက် အပြုံးလေး တွေ နဲ့ ကျန်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါတွေ ကို ဝမ်းနည်းနေမဲ့အစား ဒီလို မိသားစု လေးတွေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းမှ လွတ်ကင်းဖို့သာ ကြိုးစားရမှာဘဲ လို့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ဖြေသိမ့်ရပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ပြည်သူ တွေ ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထက် တောင် ပိုချစ် တတ် တဲ့ ဒီလို အမျိုးသမီးကြီး ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သူရဲကောင်း လိုဘဲ ကိုးကွယ်ခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ် ကို ကျွန်မ ရင်နာ လိုက်တာ။
တကယ်က ကျွန်မ တို့ သူ့ကို ကောင်းကောင်းကြီး ခိုင်း နိုင်ပါရက် ၊ သူ ကလဲ ပျော်ရွှင်စွာ ခိုင်းခွင့်ပေး ခဲ့ပါရက် လွဲနေဆဲ။
ဒီ အမျိုးသမီးကြီး ရဲ့ အလုပ်တိုင်း ဟာ ကျွန်မ တို့ အတွက်ပါ။ တိုင်းပြည် အတွက်ပါ။
သူလဲ တတ်နိုင်သမျှ သူ့ရဲ့ ပညာဉာဏ်အား၊ ဝီရိယအား တွေကို စိုက်ထုတ်ပြီး သေလုမျောပါး ကြိုးစားနေတာ အားလုံး အမြင်ပါ။
သူ့မှာ အမှား လုပ်ခဲ့တယ်ပြောချင်လား။ အမှောင်ထဲ စမ်း လုပ်နေရတဲ့ အလုပ် တခု အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ဟာ မှားလား၊ မှန်လား ။ ဘယ်သူ မှ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါ။ ရိုးရိုး အခြေအနေ မှာ ပလန် ကောင်းကောင်း နဲ့ အမှားနဲ အောင် လုပ်နိုင်ပေ မဲ့ ဖျက်မျဉ်း တွေ ကြားမှာ အလုပ် တစ်ခု ကို ပလန် ကောင်းကောင်း နဲ့ လုပ်ဖို့ အင်မတန် ခက်ပါမယ်။ အမှား ကင်းမှာ မဟုတ်ပါ။ လောကထဲ အမှား ကင်းသူ ရှိနိုင်လို့လား။
သူ့ကို အပြစ်ပြော ဝေဖန်သူများ ဝင်လုပ်ကြည့်ပါလား။
သူ့ထက်တောင် အမှားကြီး ၊ အမှားများ မှာ လောင်းကြေးထပ်ချင်ရဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူ အကျဉ်းစံ တုန်းက သူ့လို တစ်ယောက်မှ ပေါ်မလာတာ အသိသာကြီးပါ။
တကယ်တော့ ကောင်းစေလိုတဲ့ ဝေဖန်ရေး ကို ကျွန်မတို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပုတ်ချ နာမည်ဖျက် မဲ့ ဝေဖန်ရေး ကို တော့ လက်ခံရမှာ မဟုတ်ပါ။
သူ့လို အစွမ်းမရှိဘဲ၊ သူ့လို စေတနာ မထားနိုင်ဘဲ သူလုပ် နေတာ တွေ ကို အပြစ် မပြောကြပါ နဲ့။
သူ့နောက် က ယုံယုံကြည်ကြည် လိုက်ကြပါ။
သူလုပ်တာ ကို အပြုသဘောထောက်ပြပါ။
၂၀၁၅ အလွန်မှာ သူ့ ကို ဒီ အတိုင်း ကြည့်နေ ရမဲ့ အဖြစ် ကို မလိုချင်ကြပါနဲ့။
ဒီ စာ ကို ရေးရင်း Everything I do, do it for you သီချင်း နားထဲ တိုး လာတယ်။
သူလုပ်ပေးနေ တဲ့ အကြောင်းတိုင်းဟာ၊ ကျွန်မတို့ အတွက်၊ ပြည်သူ တွေအတွက်၊ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ။
တန်ဖိုးမရှိဘူး လို့ မပြောကြပါနဲ့။
ဖတ်ပေးသူ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Bryan Admas “(Everything I Do) I Do It For You”
မြစပဲရိုး says: Everything I Do, I Do It For ME တွေ ကြားမှာ Everything I Do, I Do It For You ကို တန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ။
kai says: “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲ စကားကြီးက ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ သဂျီး။ တကယ်ပြောတာ။ ဘာလို့ဆို ဟိုလူကြီး ကင်ဂျုံအီ ကလည်း အဲဒီစကားကြီးကို ပြောခဲ့လို့။ တိုင်းပြည်အတွက် စတေးပေးစရာ အသက်နှစ်ချောင်းရှိရင် ကောင်းမှာပဲလို့ နောက်ဆက်တွဲ ပြောခဲ့တာကိုး။ အဲဒါနဲ့တွဲပြီး အဲဒီစကားကြီး ဟာသ ဖြစ်သွားတာ။
.အမလတ်ရေ အားလုံးက အမေစုစကားကို နားထောင်ကြမှာပါ။ ပြသနာအစစ်က နားထောင်ပေမယ့်လည်း မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။ အဲဒါ ပြသနာ။
.ရန်ကုန်မြို့မှာ ကားလမ်းပိတ်တာက တောင်-မြောက် သွယ်တန်းတဲ့ လမ်းတွေပဲရှိပြီး အရှေ့-အနောက် ကန့်လန့်ဖြတ်လမ်းက နည်းပါးနေလို့တဲ့။ ဒါကြောင့် တံတားတွေဆောက်လည်း ပြသနာ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့။
kai says: ၂၀၁၅မှာ ဒေါ်စုက (အနည်းဆုံး) လွှတ်တော်ဥက္ကဌလောက်ဖြစ်ရင်ကို တော်တော်ဟုတ်နေပြီ..။
၂၀၁၆မှာ ဟီလာရီကလင်တန်က ယူအက်စ်သမ္မတဖြစ်ဖို့.. နှုန်းတော်တော်များသမို့.. သူတို့၂ယောက်က ပါစင်နယ်ခင်မင်ရင်းစွဲလည်း ရှိကြတာမို့.. နောင်တိုင်းပြည်အတွက်တော်တော်ကောင်းသွားမယ်ထင်မိတယ်..။
ဒေါ်စုကို စိန့်ပြည်ကလည်း.. တော်တော်သတိထားအရေးပေးလာတာမို့..။
တခြားဘာအစွဲမှမထား.. တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်သွားစေချင်လိုစိတ်ကလေးနဲ့တင်.. အဲလောက်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းလုပ်ကြဖို့သင့်တယ်..။
ကားလမ်းနဲ့ကားကြပ်တာကတော့.. ပညာရှင်ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးလိုက်ရင်.. တချက်ပါပဲ..။
ငွေ(ဘက်ဂျက်)တော့လိုတယ်ပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အခုဘဲ ဒီက News ချန်နယ် တစ်ခု ထဲ မှာ ဝေဖန်ထားတာ တစ်ခု ကို ခံပြင်းလွန်းလို့။
ဟီလာရီ ဆိုတာ တဲ့။သူ့ ယောကျာင်္း ကလင်တန် ရဲ့ အရှိန် နဲ့ မို့ ဖြစ်လာတာတဲ့။
သူ့ အရည်အချင်း ကြောင့် ချည်း မဟုတ်ဘူး တဲ့။
သူပြောသလို ဆိုရင် နာမည်ကြီး အောင်မြင်တဲ့ လူ တွေ ရဲ့ မိန်းမ တိုင်း အောင်မြင် ထက်မြက် ရ မှာပေါ့။
တကယ်တန်းမှာ သူ တော် လို့ သူလုပ်နိုင်လို့ ဖြစ်ရတာကိုများ။
ကြည့်ရတာ ရီပတ်ဘလိကန် တွေ ရဲ့ ဘက်တော်သား ထင်ရဲ့။
ပြောကြေးဆို ဒါဟာ Discrimination ဘဲ။
ဒီလိုကြေး ဆိုရင် ရီပတ်ဘလိကန် ဘက်က အရွေးခံ မဲ့ ဘုရှ် ကရော ဘာထူးလဲ။
သူ့ အဖေ ၊အဖိုး မိသားစု အရှိန် နဲ့ ဘဲ မဟုတ်လား။
နောက်နှစ် ရှင်တို့ ဆီက ရွေးကောက်ပွဲ ကတော့ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပြီ။
ဟီလာရီ အတွက် မဲဆွယ် လေတော့ သူကြီး ရဲ့။ ညီမပြုံး ရေ ရန်ကုန် မှာ ကားများ တာတွေ၊ လမ်းကျဉ်း တာ တွေ က ဒီ က နဲ့ ယှဉ်ရင် အများကြီး တော်ပါသေးတယ်။
ဒီလောက် ကား တွေ က များလွန်တယ် မပြောနိုင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး လမ်း တွေ က လဲ ဖောက်ထားတာ အချိုး ကျ တယ် ခေါ် နိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန် လမ်း မြေပုံ လေးကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ရန်ကုန်မြေပုံ အသစ်လေး ရခဲ့သေးတယ်။
ကားကြပ် တယ် ဆိုတာက ၃ လိုင်းပေးထား ရင် အဲဒီ လိုင်း တွေထဲ မှာ စနစ်တကျ မနေဘဲ ကြား တွေထဲ တိုး ကြတယ်။
၃ လိုင်းက နေ ငါးလိုင်း လောက်ထိ ပွါးပြီး ကို ကြားဝင် ကြတယ်။
ကွေ့လိုင်း ရှိရက် အဲဒီလိုင်းမှာ မစီဘဲ အတည့်လိုင်း ကို ယူမောင်းကြပြီး ကွေ့ကာနီး နေရာမှ သူများ ကြား ကို အတင်း ဝင်တိုး ကြတယ်။
(ဥပမာ – ခြောက်မိုင် ဘက် က လာတဲ့ ပြည်လမ်း ပေါ်ကနေ အင်းလျားလမ်း ပေါ် အဝင် ကွေ့လိုင်း)
သူတို့ က ကန့်လန့် ခံ သွားတော့ နောက် က အတည့်သွားမဲ့ ကား တွေ က ရပ်နေ ရရော။
နောက်ပြီး လမ်းဆုံ လမ်းခွ အကျယ် အကြီးကြီး တွေ မှာ မီးပွိုင့် လဲ မတပ်၊ ရဲ လဲ မရှိ တော့ ဝရုန်းသုံးကား နဲ့ မကြာသင့်ဘဲ ကြာ ကြရော။
(ဥပမာ – တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း က နေ ဆရာစံ ကို အဝင်လမ်း)
အဝိုင်း လို နေရာမျိုးမှာလဲ စည်းကမ်း က ဘယ်ဖက် က လာတဲ့ ကား ကို ဦးစားပေး ရ မှာ ကို ဝင်ချင်သလို အတင်း တိုးဝင်ကြ တာ မို့ မလိုဘဲ ကားပိတ် ကုန်တာ။
(ဥပမာ – ဟံသာဝတီ အဝိုင်း)
ကားများ ရင် လမ်းပေါ်မှာ သွားချိန် (ရုံး/ကျောင်း တက်ချိန်) တွေ က သာမာန်ထက် ပိုကြာ တတ် တာ သဘာဝ ပါဘဲ။
ဒါကတော့ ဘယ်မှာ မဆိုပါ။ အဆန်းမဟုတ် သင့်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန် မှာ က လမ်းလျှောက်တဲ့ လူ တွေ အတွက် ပလက်ဖောင်း မရှိ၊ လမ်းကူးဖို့ မျဉ်းကြား မှာ လဲ ကား တွေ က ရပ်မပေး ၊ ရပ်ပေး တဲ့ ကားသမား ကိုလဲ ကားမမောင်းတတ်ဘူးလား ဆဲ ဆိုတော့ လမ်းပေါ်က လူ တွေ ကလဲ လျှောက်ချင်သလို လျှောက်၊ ကူးချင်သလိုကူး နဲ့မို့ ကား တွေ က သူတို့ ကို ရှောင်မောင်း ရတော့ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် သံသရာ မှာ ဗရမ်းဗတာ မြို့ကြီး ကို ဖြစ်လို့။
ကြားထဲ ဆိုက်ကား တွေ၊ ထော်လာဂျီ တွေ ရဲ့ ပညာစွမ်း ကိုလဲ အထင်သေးလို့ မရ။ ဟုတ်လို့။
စည်းကမ်း ရှိအောင် လုပ်ဖို့ မခက်ဘူး။
တာဝန်ရှိသူများ က မလုပ်တတ်တာလား၊ စိတ်မဝင်စားတာလား၊ လုပ်ပေးရကောင်းမှန်း မသိတာလား၊ စေတနာမရှိ တာဝန်မသိတာလား ။ မပြောတတ်တော့။
နောက်ဆို “ငါသာ မြို့တော်ဝန် ဖြစ်ရင်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ စာစီစာကုန်း ရေးခိုင်းပြီးမှ မြို့တော်ဝန်ခန့်သင့် သလားဘဲ။
အခုတော့ ကိုယ့်တာဝန် ဘာ ဆိုတာမသိ တဲ့ အသုံးမကျ တဲ့ လူ က ရာထူးယူပြီး ကိုယ့်အတွက် လာဘ်လာဘ ဘဲ စောင့်ယူဖို့ ကိုဘဲ တတ်တော့ ဒီလို ဖြစ်နေတာ မဆန်း တာမှ မဆန်းပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: သီချင်းနဲ့ အဆိုတော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သီချင်းကို ကြိုက်တယ်၊ သူ့အသံကို ချစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မြင်တာတွေ အမြင်မတော်တာတွေ အဆင်မပြေတာတွေကို မပြောချင်တော့ဘူးးး
တခြားနိုင်ငံက နေ ပြောနေတာတို့ ဘာတို့ အပြောခံရမစိုးလို့။
အဆိုးရနဲ့ ပတ်သက်ရင် လက်ရှိ အဆိုးရရော
လက်ရှိ စေတနာမရှိတဲ့အဆိုးရကို ထောက်ခံနေတဲ့ သူတွေရော ဟာ
ကဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ မကျန်တော့အောင် စီမံကိန်းနဲ့ ဖျက်စီးနေတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်။
I still have no idea until when they want to hold IT and why they still don’t want to let IT go.
မြန်မာပြည်က ရှိသမျှ ချမ်းသာသမျှ ယူလို့ ဖြုန်းလို့ ကုန်ပြီပဲဟာ။
နိုင်ငံကို နာလန်ထူခွင့်လေးတော့ ပေးသင့်ပါပြီ။
ဒီ သီချင်း က The best of 90s လို့ ညွန်းကြတာဘဲ။
အရီး တို့ ခေတ်ကောင်းစဉ် အခါ ကပေါ့။
တို့တွေ ရဲ့ ဂျန်နရေးရှင်း က ဒီနေ့ခေတ် အထိ တိုင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်မှု တွေ အများကြီး။
. ပြူတင်းပေါက် နဲ့ ပန်းသီး အပါအဝင် ပေါ့။
အခုထိ ဒါတွေ ကို ဘယ်သူမှမကျော် နိုင်ကြသေး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဖဘ မှာ တက်မရေးရဲသေးလို့.. ဒီမှာ လာရေးတယ်..
အခု အစိုးရကို ဆက်ထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ..
(၁) ဦးနှောက်မရှိတဲ့ နာလပိန်းတုန်းတွေ​ (လှောင်ပိတ်ခံလူတန်းစား)
(၂) အစိုးရကိုမှီပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေတဲ့သူ
အဲ့ (၂) မျိုးထဲက တစ်ခုပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လုံမလေး
မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် သုံးပြီး ဘန်ကောက် အသွားအပြန် လုပ် ဆေးစစ် နေသူ တွေ ၊ ဈေးဝယ်ထွက်နေသူ တွေ အနေနဲ့ အခြေအနေပြောင်းရင် ဒီ စည်းစိမ် တွေ ထိမစိုးလို့ အာဏာကို မဖယ်ရဲ တာ က မဆန်းဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ အောက်ခြေ လူ တွေ က အရိုးအရင်းလေး ဝါး နေရတာ ကိုဘဲ နတ်သုဒ္ဓါထင်ပြီး လူထု အနေနဲ့ စည်းလုံးဖို့ ကို ဂရုမထားကြတော့တာ က တော့ ကိုယ့်ကောင်းကျိုး ကို ရဖို့ မကြိုးစားတာ လို့ မြင်မိတယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ်လည်း ဘယ်လိုပင် လူကြီးလူကောင်းဆန်ချင်ယောင် ဆောင်ဆောင်…
ရန်ကုန်ရောက်လို့ ကားမောင်းရင် ငယ်ကျင့်တွေပေါ်ရော… မပေါ်လို့လည်းမရ …
အဲသည့်လိုမှ ခေါင်းထိုး ဇွတ်အတင်းဝင်တဲ့ကားတွေကို လိုက်ကပ်မပေးရင်…
ကားတွေများ ယာဉ်ကြောကျပ်….လိုရာခရီးကို မရောက်တော့ဘူး…
ကားငှါးစီးပြန်တော့လည်း မောင်းပုံတွေက အချိုးမပြေလို့ ရင် တမမ…
စကားမစပ်… ဘီလ် ကလင်တန်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မဲဆွယ်ပွဲ (1992) မှာ
သူ့ဇနီး ဟီလာရီကို ညွှန်းဆိုပြောတာလေး အမှတ်ရမိတယ်…
The nation would “get two for the price of one”…
kai says: လာမယ့်မေလမှာ.. မြန်မာ့ဂဇက်က ဟို့စ်လုပ်ပြီး.. အယ်လ်အေမှာပွဲတပွဲလုပ်ထားတယ်..
ပွဲတက်မယ့်သူတွေထဲ.. Suu Foundation က president အပါအ၀င်.. ဒါရိုက်တာတွေပါတယ်လေ.။
မစ်ရှဲကတော့… မလာနိုင်ပဲ.. ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ပို့ပါမယ်..။
၆၂ကတည်းက.. ဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်(မပြတ်)တဲ့.. ယူအက်စ်ဖယ်ဒရယ်အောက်က.. အာရှရေးရှာ သင့်တန့် East-West Center က.. ဒါရိုက်တာတယောက်လည်းပွဲတက်မယ်..။
နေပြည်တော်မယ်.. ၆ပွင့်ဆိုင်နေပြီမို့.. ယူအက်စ်မြေမှာ.. ဒီလိုလာဆိုင်ကြတာဟာ.. မဟာဗျုဟာအရအင်မတန်အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်.. ထင်မိတယ်..။
Suu Foundaton မှာက… ဒေါ်စုပါတယ်..။ ဟီလာရီကလင်တန်ပါတယ်..။ အရင်သမ္မတ ဘုရ်ှကတော်.. လောရာဘုရ်ှပါတယ်..။
နောက်နှစ်.. ဒီအချိန်လောက်မှာ.. ဒေါ်စုက.. လွှတ်တော်ဥက္ကဌဖြစ်…။
ဟီလာရီကလင်တန်က.. ၂၀၁၆ သမ္မတရာထူးအတွက်အသည်းအသန်မဲဆွယ်နေရချိန်မို့… အားလုံး Win-Win သွားအောင်.. အဲဒီ၂ယောက်ကိုဖိတ်ပြီး.. ပွဲတခုခုလုပ်မယ်မှန်းကြောင်း….. လောလောဆယ်အထိတော့… ရီပါ့ဗလစ်ကင်ထဲ… ခရစ်စ်နဲ့.. ရိုဘီရို.. ထိပ်ပိုင်းမရောက်လာသေးသ၍… ဟီလာရီဖက်ကို.. သာသာထိုးထိုးပုံထားကြောင်း…။ http://www.suufoundation.org
မြစပဲရိုး says: ကြည့်ရတာ သူကြီး က စနစ်/ပေါ်လစီ တွေထက် လူ ကို ပိုပြီး ကြည့်ပေးမဲ့ သဘောပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပါတီတခုထဲကို.. ၈နှစ်အထက်သမ္မတနေရာပေးရင်.. ပေါ်လစီရေးရာမှာ.. စနစ်မှာ..ခြေလှမ်းကျွံတတ်မယ်ထင်သမို့.. (သာမန်အားဖြင့်) ၂၀၁၆မှာ ရီပါ့ဗလစ်ကန်ပါတီဖက်ကတက်လာသူကိုမဲပေးရမယ်လို့.. သဘောပေါက်ထားသဗျ..။
ဒါပေမယ့်.. အခုအိုဘားမားလက်ထက်မှာက.. ကွန်ဂရက်နဲ့စိနိတ် ၂ခုလုံး.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်မဂျောရတီမို့.. ချိန်ခွင်လျှာမျှနေတယ်လည်းထင်မိတယ်…။
တကယ်လို့သာ.. ဒီအတိုင်းကွန်ဂရက်နဲ့စိနိတ် ဆက်သွားမယ့်အခြေအနေများလာရင်.. ဒီမိုကရက်ဖက်က..သမ္မတပဲတက်ရအောင်လုပ်မှာလို့.. ထင်တယ်..။
တကယ်တော့.. အိုဘားမားက.. ကလင်တန်အမဲလို့တောင်ပြောကြတာပါပဲ..။
မြစပဲရိုး says: ကျောက်စ် ရဲ့ တစ်ချို့ ကားသမား များ ကို လမ်းမသိလို့ စီး သူက လမ်းပြပေးရတဲ့ အဖြစ်တွေ လဲ ပေါမှပေါ။
စည်းပျက်တာက အဲဒီ အငှားကား တွေ ကအဆိုးဆုံးဘဲ။
စီးသူ တွေကလဲ မြန်မြန်ရောက်ဖို့ လိုရင်းမို့ သူတို့ တိုး တာ ကို အသာကြည့်နေကြမယ်ထင်ရဲ့။
ကိုယ့် ရင်သွေး လေး ကို ကိုယ့်လက် ၊ ကိုယ့်ခြေ စိတ်ကြိုက် ပြုစု နိုင်တာ အတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ ကျောက်တို့ နှင်းတို့။
ဒီလို အချိန်လေး က အကြောင်း တွေ ကို ကလေး ကို ပြန်ပြော ရင် သူတို့ အရမ်းသဘောကျတာ။
ဒီတော့ ကြီးလာချိန် ကိုယ် နဲ့ သူ့ကြား မှာ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ Bond တစ်ခု ရသွားတာလေ။
ဒါကို မြန်မာပြည်ထဲ က သူဌေး များ ဂရု မထားကြဘူး။
နာနီ ထားမှ ဂုဏ်တင့်တယ် ထင်ကြတယ်။
အိပ်ပျက်ည တွေ က နေ ပိုပြီး စည်းလုံးတဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝ လေး တည်ဆောက်နိုင်တာ မဟုတ်လား။
အရီး ကတော့ ကျောက်တို့ နှင်းတို့ အတွက် တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဝီလီလေး ကြီး ရင် ပြောပြ ရမဲ့ ပုံပြင်တွေ ထဲ မှာ ဒီလို အကြောင်းတွေက ထိပ်ဆုံးပေါ့။
ဟီလာရီ ကတော့ အင်မတန် တော်တဲ့ စိတ်ပြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးပါ။
ဝင်းစကီး ကိစ္စ မှာ သူဘယ်လောက် ကိုင်တွယ်တတ်ခဲ့လဲ။ နော။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ဖြစ်​​နေတဲ့ ​တွေ့​နေတဲ့ အခင်းအကျင်းကိုကြည့်​ပြီး​တော့
သမ္မတ ဖြစ်​ဖို့ မရှိဘူး ဆိုတာကို ​တွေးမိ​နေတာ ကြာပါပြီ…
သွားမယ့်​လမ်းက အတားအဆီး​တွေဟာ ​ပေးထားတဲ့အချိန်​နဲ့ ​ဖြေရှင်းဖို့ လုံးဝ မ​လောက်ဘူးလေ
ဒီသီချင်းကိုေ​တော့ piano သံ​လေးနဲ့ ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး နား​ထောင်​ချင်​ပါ​သေးရဲ့ ​ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မလတ်ရဲ့ပိုစ့်တွေကို ကြိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်ကတော့ အကြိုက်တကာ့ အကြိုက်ဆုံးထဲမှာပါတယ်။
ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာလည်း ရှိတယ်။
ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစလည်းရှိနေတဲ့သူကို ကိုးကွယ်မိတဲ့အတွက် တခါမှ နောင်တမရဖူးဘူး။
Alinn Z says: အမေစု စကားတွေံကို အတော် ကြိုက်တယ်
သားတွေ သမီးတွေက သားသမီးပီသဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ခံစားနေမိတယ်
padonmar says: ဟီလာရီက အခြားသူထက် မြန်မာပြည်ပေါ်ပိုကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိန်းမမို့ လေးစားပါတယ်။
kai says: ဒီနှစ်ထဲ.. ဒေါ်စုက..ဥက္ကဌဖြစ်..။
နောက်နှစ်.. ဥက္ကဌအနေနဲ့.. ယူအက်စ်ကိုဖိတ်..။
အဲဒီပွဲကို.. ဟီလာရီလာတက်မယ်လို့.. ထင်မိတယ်..။ (သာမန်ဟီလာရီကို ပွဲတက်ဖိတ်ရင်.. ဒေါ်လှသိန်းဂဏန်းလောက်ပေးရတယ်..။)
ဒေါ်စုက..ယူအက်စ်ကွန်ဂရက်အပေါ်.. လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လေ..။ ဟီလာရီတို့..သမ္မတပွဲက..၂၀၁၆မှာ..။
ဟီလာရီက..ဒေါ်စုကိုသုံးပြီး.. မဲဆွယ်ချင်မယ်လို့.. ထင်မိတယ်..။
Courage says: ဒီသီချင်းတွေနဲ့ Bryan Adams ဆိုတဲ့ ခပ်ဖျော့ဖျော့ လူဖြူကြီးကို ကျွန်တော်စသိတာဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။
စာသားကို နားမလည်ရင်တောင်သံ သံစဉ်နဲ့ သူ့ရဲ့ အသံနေအသံထားကို နားထောင်ပြီး ခံစားလို့ရတဲ့ သီချင်းလေးပါ။